ऋण लिनेलाई सुनौलो अवसर सस्तियो ब्याजदर ,हेर्नुस् कुन बैंकको आधार दर कति? - साँचो खबर Online Khabar
ऋण लिनेलाई सुनौलो अवसर सस्तियो ब्याजदर ,हेर्नुस् कुन बैंकको आधार दर कति?
२०७७ माघ २१, बुधबार (१0 महिना अघि)
बैंकहरुमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम हुँदा ऋण लिन चाहनेलाई ब्याजदरमा लाभ मिलिरहेको छ। हाल सबैजसो वाणिज्य बैंकहरुबाट एकल अंकको ब्याजदरमै ऋण लिन पाइन्छ।
‘पर्याप्त लगानीयोग्य रकम हुँदा बैंकहरुबीच सस्तो ब्याजमा ऋण दिने प्रतिस्पर्धा छ, यसले गर्दा ब्याजदर घटिरहेको हो’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ किरणकुमार श्रेष्ठले भने।
पुस मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंकको समग्रमा औसत आधार दर ७. १९ प्रतिशत छ। यसअघि असोज मसान्तसम्म समग्र औसत आधार दर ७. ७९ प्रतिशत थियो।
गत वर्षको पुस मसान्तसम्म समग्रमा औसत आधार दर ९.४९ प्रतिशत थियो। एक वर्षको अवधिमा औसत आधार दर नै २. ३ प्रतिशतले घटेको छ। औसत आधार दर घट्नु भनेकै ऋण लिनेका लागि ब्याजदर सस्तिनु हो।
हाल कुनै पनि बैंकको आधार दर ८.४ प्रतिशतभन्दा माथि छैन। आधार दरका आधारमा सिभिल बैंकको सबैभन्दा धेरै ८.४५ प्रतिशत छ भने राष्ट्रिय वाणिज्यको सबैभन्दा कम ५.६१ मात्रै छ।
बैंकहरुको ऋणको ब्याजदर तय गर्दा आधार दरमा निश्चित प्रिमियम दर जोड्ने गर्छन्। अहिले आधार दर मात्रै घटेको छैन, बैंकहरुले त्यसमा जोड्ने प्रिमियम दर समेत घटाएका छन्।
‘अहिले आधार दरमा जम्मा ०.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थपेर बैंकहरुले ऋण दिने गरेका छन्, प्रतिस्पर्धाका कारण त्याेभन्दा बढी त थप्न सक्ने अवस्था नै छैन ’ सिइओ श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने।
कतिपय बैंकले त झन् आधार दरमा ०.१ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थपेर ऋण दिने गरेको उनले बताए।
लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु भनेको बैंकका लागि लागत बढ्नु हो। निक्षेपकर्तालाई ब्याजदर दिइरहनुपर्छ, तर रकम थन्किँदा त्यसबाट हुने ब्याज आम्दानी घट्न जान्छ, जसले सिधै नाफामा असर पार्दछ। यसले गर्दा सस्तो ब्याजमा ऋण दिन बैंकहरुबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ।
आधार दर उच्च भएका बेला बैंकहरुले अर्को ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर थप्ने गरेका थिए। बैंकहरुले थप्ने प्रिमियम दर भने फरक फरक हुन्छ।
ऋणको प्रकृति, अवधि, धितोको मूल्य/स्वरुप, ऋणीसँगको सम्वन्ध लगायत पक्षलाई हेरेर बैंकहरुले प्रिमियम दर तय गर्छन्।
त्यसैले ऋण लिन जानुअघि बैंकको आधार दर र प्रिमियम दर बुझ्नु जरुरी छ। आधार दर कम भए पनि कहिलेकांही प्रिमियम दर बढी हुँदा ऋणको ब्याजदरमा असर पर्न सक्छ।
यसलाई उदाहरणका रुपमा हेरौं, ए बैंकको आधार दर ६.५ प्रतिशत छ, बीको ७ प्रतिशत छ। एक ऋणीलाई एले २ प्रतिशत र बीले १ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थपेर ऋण प्रवाह गर्न चाहेमा ऋणीलाई बी बैंकको ब्याज जम्मा ८ प्रतिशत पर्छ भने ए बैंकको ब्याज साढे ८ प्रतिशत पर्छ।
आधार दर मात्रै नभई बैंकले लिने प्रिमियम दरमा पनि ब्याजदर निर्धारण हुन्छ। तर हाल सबैजसो बैंकहरुले यस्तो प्रिमियम दर २ प्रतिशतभन्दा कम नै जोड्ने गरेका छन्।
बैंकहरुले लिने सेवा शुल्कमा भने नियामक राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ। कुनै पनि वाणिज्य बैंकले ऋण स्वीकृत गर्दा ०. ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउँदैनन्।
हाल सस्तो ब्याजदर मात्रै होइन, निश्चित अवधिसम्म बैंकहरुले नबढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउने गरेका छन्।
खासगरी व्यक्तिगत प्रकृतिका जस्तै घर, जग्गा, गाडी लगायत खरिदमा निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर स्थिर रहनेगरी ऋण लिन पाइन्छ।
जसले गर्दा भोलिका दिनमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन गई आधार दर बढ्न गएमा पनि स्थिर ब्याजदरमा ऋण लिनेलाई लाभ मिल्नेछ।
अहिले ब्याजदर घटेको मौकामा लामो अवधिसम्म ऋणीले लाभ लिन सक्नेछन्। स्थिर ब्याजदरमा ऋण लिन पनि आधार दर जान्नु महत्ववपूर्ण हुन्छ। सामान्यतः कम आधार दर भएको बैंकको ब्याज ऋणीलाई सस्तो पर्न आउँछ।
हेर्नुस्, कुन बैंकको आधार दर कति?
बैंक आधार दर पुस ०७७ आधार दर असोज ०७७
राष्ट्रिय वाणिज्य 5.61% 5.74%
नविल 5.76% 6.68%
स्टान्डर्ड चार्टड 6.07% 6.61%
नेपाल 6.19% 6.81%
एभरेष्ट 6.34% 7.07%
इन्भेष्टमेन्ट 6.56% 7.34%
एनआइसी एसिया 6.65% 6.50%
ग्लोबल आइएमई 6.76% 7.25%
सानिमा 6.83% 7.73%
हिमालयन 6.83% 7.16%
प्रभु 7.24% 7.39%
लक्ष्मी 7.24% 8.09%
सनराइज 7.29% 7.80%
मेगा 7.35% 8.00%
सिद्धार्थ 7.38% 8.10%
एनएमबि 7.40% 7.85%
एसबिआई 7.49% 8.37%
माछापुच्छ्रे 7.56% 8.31%
बिओके 7.67% 7.70%
कृषि विकास 7.67% 8.53%
प्राइम 7.85% 8.12%
सेन्चुरी 7.91% 8.68%
कुमारी 7.92% 8.40%
एनसिसी 7.94% 8.63%
नेपाल बंगलादेश 8.00% 9.87%
सिटिजन्स 8.25% 8.81%
सिभिल 8.45% 8.88%
सेबोनमा २५ वटा कम्पनीको आईपीओ पाइपलाइनमा
नेप्सेमा आज ठूलो गिरावट